Hadii aysan aheyn Beenleey Amal Aden cadeyn ha noo keento:Gudoomiye Terje oo Toosh ku ifiyay Gabar ku been-abuuran jirtay Soomaalidda | Dhacdooyin | Shacabka Media
Hadii aysan aheyn Beenleey Amal Aden cadeyn ha noo keento:Gudoomiye Terje oo Toosh ku ifiyay Gabar ku been-abuuran jirtay Soomaalidda
Amal Aden oo gabar qoraa soomaali ah, ayaa hadal ay dhowr isbuuc kahor ka jeedisay jaamacada Agder, ku sheegtay in darawalada baabuurta tagaasidu ay diidaan iney qaadaan, hadiiba ay u aqoonsadaan iney Amal Aden tahay.
Maamulka Gobalka Vest-Agder ayaa wacad ku maray iney arintaas baaritaan ku sameyn doonaan, si ay xaqiiqada uga salgaaraan. Maadaama magaalooyinka ay Amal sheegtay in looga diidey iney tagsiga raacdo, ay kamid tahay magaalada Kristiansand oo caasimad u ah gobalkaas Vest-Agder.
Terje Damman oo ah gudoomiyaha gobalka Vest-Agder, ayaa tvga qaranka ee NRK u sheegay in baaritaan kadib, ay soo heli waayeen wax raad ama cadeyn ah oo sheegaya in Amal la faquuqey ama cunsurinimo lagu sameeyay.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa caro laga dheehanayo ayaa eedeyn u jeediyey Amal Aden, isaga oo sheegay iney fiicnaan laheyd iney cadeyn ama documenti fiican u heysato eedeymaheeda ku aadan arintaas.
Waxaan kulan la yeeshay dadka ka shaqeeyo tagaasida, isla markii ay soo dhamaatay khudbada. Waxaana loo direy iney ka shaqeeyaan xaqiiqo raadinta eedeyntaas. Waxaan xiriir la sameeyay Amal, aniga oo ka codsadey iney noo dirto documentiyada cadeynaya arintaas.
Documentiyada aan ka helay Amal, waan ka xumahay ma ahan kuwa gacan lagu qaban karo. Maadaama eedeynteedu ay tahay mid halis ah, waxaa qumanaan laheyd iney cadeymo fiican heysato, gaar ahaan markii eedeymuhu ay yihiin kuwo sumcad daro usoo jiidaya dadka tagaasida ka shaqeeyo oo dhan.
Gudoomiyaha ayaa hadalkiisa raaciyay iney sameeyeen baaritaan baaxad weyn, isla markaana aysan soo helin wax tilmaami kara khalad , balse taas badalkeeda ay soo heleen in wax walba ay ku socdaan sidii loogu tala galay.
Amal Aden: Anigu documentiyada oo dhan ma uruuriyo
Tvga qaranka ee NRK ayaa xiriir la sameeyay Amal Aden, iyaga oo wax ka weydiiyay eedeynta uu usoo jeediyay gudoomiyaha gobalkas Vest-Agder.
Amal ayaa iska fogeysay eedeymahaas, waxeyna sheegtay iney wixii cadeymo ay heysay, ay u gudbisey gudoomiyaha. Iyada oo sheegtay inay wax badan ku safarto oo ku wareegto gudaha Norway, isla markaana aysan uruurin documenti walba. Waxeyna hadalkeeda raacisay in arintan aysan hada dhicin, balse ay dhacday laba mar oo kala duwan oo hore.
Amal ayaa sidoo kale sheegtay sheegtay in arintan ay sidoo kale khuseyso haween badan.
Halkan ka akhriso warka oo af-noorwiji ku qoran:
« Previous StoryRuwaayadii Dekedda Boosaaso baan balaarinayaa?iyo Deked baan Garacad ka dhisayaa?waxay ku soo dhamaatay Koofiyaddo Shaqaalo Shiineys ah inta Madaxa la saarto Shacabka Dhul-Udug been in lagu maaweeliyo:Qalinkii:Sawirka Maanta ee Sh-MediaNext Story »Akhriso:Warsangali iyo Dhulbahante oo Muqdisho lagu dhacay:Toloow Cameey ma is-casili-doonaa?Gaasna Maxkamad ma la saari-doonaa?marba hadii Damjadiid uu si hoose uga iibsaday Xildhibaanadii la siiyay Soomali-diidka(Somaliland)(Original-Document)